Saxiixa ugu horreeya Mourinho ee Man United ma’ahan Zlatan Ibrahimovic ee waa Eric Bailly – Gool FM
Haaruun June 7, 2016
(Manchester) 07 Juunyo 2016 – Man United ayaa la sheegayaa inay kooxo badan oo Yurub ka dhisan ku garaacday saxiixa daafaca dhexe ee Eric Bailly, kaasoo ugu kici kara adduun dhan 30 milyan oo gini.
Daafaca dhexe ee kooxda Villarreal Eric Bailly ayaa ka gudbay tijaabada caafimaad ee uu u maray Manchester United sida ay warinayso Sky Sports.
Qiimaha xiddigaan ayaa la sheegay inuu ku kacayo 30 milyan oo gini, Red Devils ayaana la soo warinayaa inay tartanka daafacan xulka qaranka Ivory Coast ku garaacday kooxaha Man City, Barcelona iyo Paris Saint-Germain.
Inkastoo Zlatan Ibrahimovic la warinayey inuu noqon doono saxiixa ugu horreeya macallin Jose Mourinho ee garoonka Old Trafford ayaa haddana 22 sano jirkaan daafaca ka dheela waxa uu u muuqdaa mid ku garaacay xiddiga reer Sweden arrintaas, isagoo noqon kara saxiixa koowaad Macallin Jose Mourinho ee Man United.
RASMI: Giampiero Ventura oo loo magacaabay tababaraha cusub ee xulka qaranka Talyaaniga